Ester 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
8 Saa da no, Ɔhene Ahasweros de Haman+ a na ɔmpɛ Yudafo asɛm+ no fie maa Ester, na Mordekai begyinaa ɔhene anim, efisɛ na Ester aka sɛ ɔyɛ ne busuani.+ 2 Afei ɔhene no yii ne pɛtea+ a ogye fii Haman hɔ no maa Mordekai, na Ester de Mordekai sii Haman+ fie so. 3 Ester san ne ɔhene bɛkasae; ɔhwee ne nan ase sui na ɔsrɛɛ+ no sɛ ɔnsakra pɔw+ bɔne+ a Agagni Haman bɔe wɔ Yudafo ho no. + 4 Afei ɔhene de ne sika poma+ no kyerɛɛ Ester so, na ɔsɔre gyinaa ɔhene no anim. 5 Ester kae sɛ: “Sɛ manya ɔhene anim dom+ na ɔbɛpene so na eye ma no na n’ani gye me ho ampa a, ma wɔnkyerɛw nkotwa Agagni+ Hamedata ba Haman apam a ɔkyerɛw+ sɛ wɔnsɛe Yudafo+ a wɔwɔ ahemman+ no nyinaa mu no mu. 6 Mɛyɛ dɛn atumi ahwɛ me manfo ahohia, na mɛyɛ dɛn atumi ahwɛ m’abusuafo sɛe?” 7 Enti Ɔhene Ahasweros ka kyerɛɛ Ɔhemmaa Ester ne Yudani Mordekai sɛ: “Monhwɛ, mede Haman fie ama Ester,+ na ɔno nso wɔasɛn no dua so,+ efisɛ ɔpɛe sɛ ɔde ne nsa ka Yudafo no. 8 Biribiara a ɛfa Yudafo ho a mo ankasa susuw sɛ eye ma mo no monkyerɛw no ɔhene din+ mu na momfa ɔhene pɛtea nsɔ ano, na biribiara nni hɔ a wɔakyerɛw no ɔhene din mu de ne pɛtea asɔ ano a obi betumi adan no.”+ 9 Enti ɔsram a ɛto so abiɛsa, a ɛne ɔsram Siwan, da a ɛto so aduonu abiɛsa no, wɔfrɛɛ ɔhene akyerɛwfo+ bae, na wofii ase kyerɛw nea Mordekai hyɛe nyinaa kɔmaa Yudafo no ne ɔhene asoafo+ ne amradofo ne nsase no so mmapɔmma nyinaa, fi India kosi Etiopia. Na ne nyinaa yɛ amantam+ bɛboro ɔha aduonu ason, na wɔkyerɛw no sɛnea ɔman biara nkyerɛwee+ ne wɔn kasa+ te, ne sɛnea Yudafo nso nkyerɛwee ne wɔn kasa te.+ 10 Na ɔde Ɔhene+ Ahasweros din kyerɛwee de ɔhene pɛtea+ sɔɔ+ ano, na wɔde krataa no somaa abɔfo a wɔtete ɔhene apɔnkɔ so,+ apɔnkɔbere a wɔn ho yɛ hare mma so. 11 Ɔhene maa Yudafo a wɔwɔ nkurow ahorow mu no kwan sɛ wɔmmoaboa wɔn ho ano+ na wɔmpere wɔn kra, na wonkunkum nnipa+ a wɔwɔ amantam no mu a wɔde wɔn ani asi wɔn so no nyinaa, mmofra ne mmea, wɔntɔre wɔn nyinaa ase na wɔmfa wɔn agyapade.+ 12 Ɔsram a ɛto so dumien a ɛne Adar+ no da+ a ɛto so dumiɛnsa no ara+ na na wɔbɛyɛ eyi wɔ aman a ɛhyɛ Ɔhene Ahasweros ase nyinaa mu. 13 Wɔmaa krataa no mu nsɛm+ bɛyɛɛ mmara a na wɔde bɛto gua wɔ aman a wɔhyɛ ɔhene no ase nyinaa mu na Yudafo no asiesie wɔn ho ama saa da no ne wɔn atamfo adi asi.+ 14 Abɔfo+ a wɔtete apɔnkɔ so no hui sɛ ɛyɛ ɔhene asɛm nti wɔde ahoɔhare+ kɔɔ ntɛm. Wɔhyɛɛ mmara no wɔ Susan+ abankɛse mu nso. 15 Mordekai de, ofii ɔhene anim kɔe a ɔhyɛ ahentade+ bruu ne nwera ne sika abotiri kɛse ne nguguso+ a wɔde ɔtankɔkɔɔ+ ayɛ. Na Susan kurow no dii ahurusi bɔɔ ose.+ 16 Afei de, na hann ahyerɛn Yudafo no so ma anigye+ ne ahosɛpɛw ne nidi ayɛ wɔn dea. 17 Ahemman no mu baabiara a wɔtee ɔhene asɛm ne ne mmara no, Yudafo a wɔwɔ hɔ no ani gyei, dii ahurusi, na wɔtow pon+ sɛpɛw wɔn ho. Na aman no mu nnipa+ pii yɛɛ wɔn ho Yudafo,+ efisɛ na Yudafo ho hu+ atɔ wɔn so.